काठमाडौँ महानगरका साढे ४९ हजारले पाउँछन् भत्ता, ७५ वर्षमाथिका महिलालाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ
जेष्ठ नागरिक। तस्वीर साैजन्य : चन्द्रमणि भट्टराई
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४९ हजार ६ सय ८४ जना व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको छ।
आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा परेका, लोपोन्मुख तथा आफ्नो ख्याल आफैं गर्न नसक्ने नागरिकको सामाजिक सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले उपलब्ध गराइएको भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या हो यो।
नगद वितरणमा आधारित यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमभित्र जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति अशक्त अपाङ्ग, दलित, जनजाति, तोकिएका बालबालिकालाई राखिएको छ।
महानगरका अनुसार भत्ता पाउने व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै वडा १६ मा २ हजार ८ सय २७ जना छन् भने दोश्रोमा वडा १४ मा २ हजार ७ सय ६१ जना छन्। त्यस्तै तेश्रो धेरै संख्या भएको वडा १५ हो। यस वडामा २ हजार ५ सय २७ जना छन् । सबैभन्दा कम भएको वडा १ हो। यसमा ८१४ जना छन्। दोश्रो कम संख्या भएको वडा वडा २ हो। यस वडामा ८ सय ७७ जना व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्।
काठमाडौं महानगरका ३२ वटा वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ७० बर्ष पूरा गरेको जेष्ठ नागरिकको संख्या १७ हजार ४ सय २७ छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै वडा नं. १४ का १ हजार ८० जना, दोश्रोमा वडा १६ का १ हजार ६२ जना र तेश्रोमा वडा ३ का ९ सय ७ जनाले नागरिकले भत्ता पाउँछन् । यी नागरिकमध्ये वडा १४ का १ हजार ८८, वडा १५ का १ हजा २४ वडा ३१ का ८ सय ७३ जनाले उपचार भत्ता पनि लिएका छन्। एकल र बिधवा ७० बर्ष पुगेपछि मासिक भत्तासँगै मासिक उपचार खर्चवापत् १ हजार रुपैयाँ थप हुने भएकोले जेष्ठ नागरिकको संख्या र उपचार रकम लिने व्यक्तिको संख्या फरक भएको हो ।
दलिततर्फ महानगरभरीमा १ सय ५० जनाले भत्ता बुझ्दै आएका छन्। यसमा वडा ३१ मा ५४ जना, वडा ३२ मा १९ जना छन् । दलिततर्फ तेश्रो धेरै संख्या भएका वडाहरु ३ र १९ हुन् । यी वडामा क्रमशः १०÷१० जनाले भत्ता पाएका छन् । वडा १, ४, ८, ९, १३, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ मा यस शीर्षकमा भत्ता पाउने कोही पनि छैनन् ।
यो वर्ष महानगरका १० हजार ५ सय ९८ जना एकलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम पाएका छन् । यो संख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै वडा ७ का ६५० जना, त्यसपछि १५ का ६१५ जना र तेश्रोमा वडा ६ का ५५८ जना छन् । वडा १ र ४ मा बिधवा भत्ता पाउनेको संख्या शुन्य छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अर्को शीर्षक एकल भत्ता पाउनेको संख्या १ हजार ८६ रहेको छ । यीमध्ये वडा ४ मा धेरै छ । त्यसपछि वडा १ र वडा २५ मा छन् । ती वडामा भएका एकलको संख्या क्रमशः ४७०, १७४ र ४१ हो । वडा ९, १८, २०, २३, २९ र ३२ मा एकलको संख्या छैन ।
महानगरभरिमा पूर्ण अपाङ्गको संख्या ५१३ जना छ । यसमध्ये वडा ३ मा सबैभन्दा बढी ३० जना, वडा ३१ मा २८ जना छन् । त्यस्तै वडा ५ र ३२ मा समान २७÷२७ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । ३८१ आंशिक अपाङ्ग (अति अशक्त) व्यक्तिमध्ये वडा सबैभन्दा धेरै वडा १६ मा २८ जना, वडा २६ मा २७ जना र वडा १५ मा २४ जना छन् । बालपोषणअन्तर्गत मासिक भत्ता पाउने बालबालिकाको संख्या ८ रहेको छ । यीमध्ये वडा ११ र १२ मा समान ३÷३ जना र वडा २८ मा २ जना छन् । यो भत्ता अभिभावकमध्ये कोही पनि रोजगारमा नरहेका दलित परिबारका बालबालिकालाई दिइने भत्ता हो ।
दलित, एकल महिला र बिधवाले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता प्राप्त गर्छन् । यो रकममा जेष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्चपवापत् मासिक १ हजार रुपैयाँ थप दिइन्छ । भत्ता पाउन साबिक कर्णाली र दलित बर्ग व्यक्ति भए ६० बर्ष पूरा हुनुपर्छ भने अन्य क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिले ७० बर्ष उमेर पूरा गर्नुपर्छ । उनीहरुले भत्तावापत् २ हजार रुपैयाँ र उपचार खर्च वापत् १ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना प्राप्त गर्छन् । दलित जेष्ठ नागरिक र एकल महिलाले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि भत्ता पाउँछन् ।
पूर्ण अपाङ् भत्ता मासिक ३०० रुपैयाँ हो भने आंशिक अपाङ्ता भत्ता मासिक १६०० रुपैयाँ हो । १४ जिल्लाका रोजगारबिहिन दलित परिवारका बालबालिकालाई दिइने भत्ता रकम मासिक ४०० रुपैयाँ हो । सरबारबाट प्राप्त हुने यो रकमसँगै काठमाडौ.महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने ७५ वर्ष माथिका महिला र ८० वर्ष माथिका पुरुषलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ महानगर विशेष भत्ता रकम दिने गरिएको छ ।
यसरी प्रदान गरिने भत्ता रकमवापत् महानगरले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा ३२ करोड १३ लाख ३८ हजार ९०० सय रुपैयाँ वितरण गरेको लेखा अधिकृत अनिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
गगन थापाको माग : सांसदको तलब कटौती गरेर सुरक्षाक...
कास्कीका क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेकाहरू सुरक्षित
लकडाउनले शहर सुनसान ! [फोटोफिचर]
संक्रमण फैलिएको बेलामा डेरावाललाई निकाल्ने घरपेटीमाथि कारवाही